कुष्ठरोग के हो र कसरी बच्ने ? « News of Nepal
कुष्ठरोग के हो र यो के कारणबाट हुन्छ ?
कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने मायक्रोब्याक्टेरियम लेप्रे नामको सूक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने एक प्रकारको ज्यादै कम सर्ने सरुवा रोग हो। यो रोगले खास गरेर छाला, स्नायु ९नसा० मा असर गर्दछ। यो रोग प्राचीन कालदेखि नै मानिससँग परिचित भए पनि सन् १८७३ मा मात्र नर्वेका वैज्ञानिक डा। जीए ह्यानसनले कुष्ठरोग किटाणुका कारणले हुने रोग हो भनी पत्ता लगाएका हुन्। यो रोगले छालामा असर गर्दा शरीरमा नचिलाउने, छुँदा थाहा नहुने दाग देखिने, छाला बाक्लो हुने, गिर्खाहरू देखा पर्नुका साथै स्नायुमा असर गर्दा हातगोडामा छुँदा थाहा नपाउने हुन्छ र विस्तारै यस रोगले मांसपेशी कमजोर बनाइदिन्छ। त्यस्तो छोएको थाहा नपाउने भागमा साधारण चोटपटक लाग्दा पनि छिटो निको हुँदैन।
कुष्ठोग कसरी सर्छ ?
उपचार नगरेको कुष्ठरोगको बिरामीसँग लामो समयसम्म सम्पर्कमा आउने व्यक्तिलाई श्वास–प्रश्वासको माध्यमबाट यो रोग सर्न सक्छ। तर, यो निकै कम सरुवा रोग हो। साधारणतया यो रोग सरेको २ वर्षदेखि ५ वर्षभित्रमा यसका चिह्न र लक्षण देखा पर्न सक्छन्।
कुष्ठरोगको चिह्न र लक्षण
शरीरको कुनै भागमा छुँदा थाहा नहुने फुस्रो वा हल्का रातो दागहरू देखा पर्नु शुरूको चिह्न हो।
यसबाहेक अनुहार र कानका लोतीमा गिर्खाहरू देखिनु, छाला चम्किलो र बाक्लो हुनु तथा आँखीभौं झरेर जानु कुष्ठरोगका चिह्नहरू हुन्। अन्त्यमा अपाङ्गता हुन सक्छ।
स्नायुमा असर पर्न जाँदा हात खुट्टाहरू लगातार झम–झम गर्नु, स्नायु सुन्निनु, दुख्नु, हातखुट्टा छुँदा थाहा नहुनु, मांसपेशीहरू
कमजोर हुनु आदि।
कुष्ठरोग कति प्रकारका छन् ?
कुष्ठरोगका चिह्न र लक्षणको आधारमा यसलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ।
१) बढी किटाणु भएको
२) कम किटाणु भएको
यसको उपचार बहु औषधि विधिबाट गरिन्छ। जसअनुसार बढी किटाणु भएका बिरामीले १२ महिना र कम किटाणु भएका बिरामीले ६ महिना नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्दछ। बिरामीले घरैमा बसेर औषधि सेवन गर्न सक्दछन्। बहु औषधिको १ मात्राले नै ९९ प्रतिशत किटाणु निस्क्रिय बनाइदिन्छ। तसर्थ उपचार गरेका बिरामीबाट रोग अरूलाई सर्दैन।
कुष्ठरोगको उपचार के हो ?
माथि उल्लिखित कुनै पनि चिह्न तथा लक्षण देखा परेमा तुरुन्त स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई देखाई बेलैमा नियमित उपचार गराएमा र नियमित औषधि सेवन गरेमा कुष्ठरोग पूर्णरूपले निको हुन्छ र अपाङ्गता हुनबाट बच्न सकिन्छ।
यसको उपचार बहुऔषधि विधिबाट गरिन्छ। जसअनुसार बढी किटाणु भएका बिरामीले १२ महिना र कम किटाणु भएका बिरामीले ६ महिना नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्दछ। बिरामीले घरैमा बसेर औषधि सेवन गर्न सक्दछन्। बहुऔषधीको १ मात्राले नै ९९ प्रतिशत किटाणु निस्क्रिय बनाइदिन्छ। तसर्थ उपचार गरेका बिरामीबाट रोग अरूलाई सर्दैन।
कुष्ठरोगको उपचार नगरे के हुन्छ ?
कुष्ठरोगको किटाणुले छाला र खास गरेर हात, खुट्टा र अनुहारका सतहका स्नायुहरूमा असर गर्ने हुँदा समयमा उपचार नगरे मांसपेसी कमजोर हुने, औंला खुम्चने र पछि आपाङ्गता हुन सक्दछ।
परिवार तथा समुदायमा रोग सर्न सक्दछ। ल कुष्ठरोगको ओषधि कहाँ पाइन्छ ?
नेपालका सबै अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीका साथै प्रेषण केन्द्रहरूमा कुष्ठरोगको औषधि निःशुल्क पाइन्छ। साथै हाल नेपाल सरकारले उपचार पूरा गरेका तथा विशेष सेवाका लागि अस्पतालमा भर्ना हुँदा यातायात खर्च रु। १ हजार उपलब्ध गराएको छ।
कुष्ठरोग नियन्त्रणमा समुदायको भूमिका
कुष्ठरोगप्रतिको भ्रम र डरलाई हटाउन समुदाय र परिवारका मानिसलाई सही जानकारी दिने।
कुष्ठरोगका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा कहाँ पाइन्छ भने सही जानकारी दिई रोग निदान र उपचारमा सहयोग पु¥याउने।
कुष्ठरोगको शंका लागेका व्यक्तिहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य चौकी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रमा जान सल्लाह दिने।
कुष्ठरोगका बिरामी र प्रभावितलाई उनीहरूको परिवार र समाजबाट अपहेलना हुन नदिन समुदायलाई कुष्ठरोग बारेमा तथ्य जानकारी गराई कुष्ठरोगका बिरामीलाई अपहेलना
नगर्न उत्प्रेरित गर्ने।
कुष्ठरोग पनि अरू रोग जस्तै साधारण सरुवा रोग हो, यो रोगले प्रभावित व्यक्ति पनि समाजको नागरिक हो र उनले पनि सम्मानपूर्वक आफ्नो परिवारमा जीवनयापन गर्न पाउनु उसको अधिकार हो।
सयुक्त राष्ट्रसंघको असमर्थहरूका लागि समान अवसर भन्ने पुस्तकअनुसार पुनःस्थापना भनेको असमर्थताका कारणले उत्पन्न हुने कुनै पनि समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि व्यक्तिगतरूपमा सामान्य नागरिकसरह सक्षम बनाउन प्रभावित व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर गराई सामाजिकीकरणमार्फत सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने तुल्याउनु हो। कुष्ठरोगको कारणले उत्पन्न हुने समस्यालाई आवश्यकताअनुसार चिकित्सकीय, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारका सहयोगी संस्थाहरूको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। यस कार्यक्रममा स्थानीय तह साथै सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ।
९स्रोत ः इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखा।०
कुष्ठ प्रभावित वा बिरामीले अपनाउनुपर्ने अन्य सावधानी
खुट्टामा चेतनाशक्ति नभएका बिरामीले कम हिँड्ने धेरै बेरसम्म एकै अवस्थामा नउभिने।
किला नठोकेको नरम जुत्ता लगाउने।
चेतनाशक्ति हराएका हातखुट्टालाई चोटपटक र तातोबाट बचाउने।
हातखुट्टा सुख्खा भएमा चिसो पानीमा चाला नरम नभएसम्म भिजाएर कडा छाला खुर्कने।
(धारिलो, चुच्चो नभएको वस्तुले खुर्कने)
हात खुट्टा भिजाइसकेपछि चिसो हातखुट्टामा तेल लगाएर नरम बनाई राख्ने।
आँखामा असर भएको बिरामीले दिनमा कालो चस्माको प्रयोग गर्ने र राति सुत्दा सफा कपडाले आँखा ढाकेर सुत्ने।